Malunga nathi - iShanghai Gianty yokuthengisa, iNkampani
Ukuba nguvulindlela we-zero-inkunkuma eluhlaza kwikamva kunye nokudala iinqobo zabathengi ngaxeshanye.
IGianty idlala enye yeebhendi ezibalulekileyo kwinkqubo yokupheka eco-ethandekayo. IGianty ithatha uxanduva ngakumbi kwezentlalo kukhuseleko lwendalo.
Yasekwa ngonyaka ka-2007, iGianty ibandakanyeka ekuveliseni nasekuthumeleni ngaphandle iimveliso zecandelo ezithandekayo kubathengi bezinto zorhwebo, ezinikezela ukwenza isicoci. Intloko yeentloko zeGianty ikwiShanghai kwaye izityalo ezibini zitholakala kwiNgobo naseHunan.
IShanghai Gianty ilawula kakhulu ishishini lokuthumela kwelinye ilizwe. I-Ningbo Gianty inoxanduva ngokuyintloko lokuvelisa izixhobo zokulahla inkunkuma. I-Hunan Gianty idlala indima ephambili ekuveliseni i-tableware enokuphinda yenziwe kunye neemveliso ze bamboo. Izityalo zaseGianty kubandakanya i-Ningbo kunye nefektri yesebe laseHunan zixhotyiswe ngemigca eli-17. Ngaphezulu kwe-90% yoomatshini abaqhutywa yikhompyuter kunye nerobhothi. Iqela laseGianty elaziwa kuzwelonke endlwini-liyilo lweqela lenza ukuba iGianty yenze ngokwezifiso iimveliso ezihlangabezana neemfuno zabathengi. Ukuprintwa kwe-3D yesampulu kunokubonelelwa kwiintsuku ezintathu kunye neentsuku ezintlanu zokugcina isampulu.
Iqela lokuthengisa laseGianty phesheya liqinisekisa unxibelelwano olusebenzayo nolusebenzayo kusetyenziswa amajelo eendaba kunye nokuhambisa iimfuno zabathengi kwamanye amaqela (okt R&D, amaqela emveliso kunye nawokugcina izinto). IGianty ngumenzi ophambili kunye nomrhwebi we-tafile eqinisekisayo ye-eco-friendly e-China. Iimveliso zayo zaye zathunyelwa kwamanye amazwe ngaphezu kwabaxumi abangama-20 kwilizwe liphela.
Yasekwa ngonyaka ka-2007, iGianty ibandakanyeka ikakhulu kwimizi-mveliso nasekuthengiseni iimveliso zecala ezithandekayo kubathengi, ezinikezela ekwenzeni ucoceko lwehlabathi. Ikomkhulu leGianty lifumaneka eShanghai kwaye esi sityalo sikwi-Ningbo, e-China.
Emva kokuphononongwa kunye nophuhliso lweminyaka eli-12, iGianty ibe ngomnye wabakhiqizi abakhokelayo kunye nabarhwebi bezentengiso zokulahla inkunkuma e China, kwaye bakhe ubudlelwane obuluqilima kunye nabaxumi e-Asia, eYurophu naseMntla Melika. Ngo-2016, ingeniso iyonke yayingaphezulu kwezigidi ezili-10 zeedola zaseMelika.
Senza kungekuphela iimveliso ezinokuqina kodwa nezisombululo eziluhlaza. Uluhlu lwethu olubanzi lwetabhulethi egcinakalayo ibonelela ngemveliso esemgangathweni ye-eco-friendly ngexabiso lokukhuphisana.